Indlu yaseSouth Coast Beach
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguZowie
Zilungiselele indawo epholileyo yokuphumla engaselunxwemeni ngaphezu kwelitye elisicaba elilungele abakhenkethi okanye ukubukela ii-surfers kunye namahlengesi ekhwela amaza ukusuka kubutofotofo besofa okanye ukonwabela iglasi yewayini kwidesika ngelixa uthatha impepho entle yolwandle ukuze ulale kwi Izandi zolwandle. Ukubaleka ngokugqibeleleyo kwimpelaveki okanye iholide yosapho. Ukusebenza ekhaya akuyongxaki i-WIFI ebonelelwe kwipropathi
Amagumbi okulala ama-3 aphezulu kunye neendawo zokuhlala ezi-2 enye iphambi kwendlu kwaye enye inesicwangciso esivulekileyo sokuhlala, ikhitshi kunye negumbi lokutyela zonke ezineembono zolwandle zomlingo. Idekhi ephambi kolwandle kunye nendawo ye-BBQ ekuvumela ukuba wonwabele umoya wokuthatha iimbono kwaye ubukele iminenga okanye izaqhwithi zingena. Ngaphantsi lelinye igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala eli-1 elinebhanti kathathu eneembono zolwandle.
Indlu ineencwadi, imidlalo kunye nezinto zokudlala zabantwana ukuze wonke umntu akwazi ukonwatyiswa. Kukwakho nebhedi ephathwayo yayo nayiphi na i-bubs. Umatshini wekofu, i-WIFI kunye neendawo zokupaka zonke ziyafumaneka kwipropathi. Ilinen kunye neetawuli zinikezelwe.
Ungalibali abaqubhi kunye netawuli yaselwandle.
Ukuhamba ngamatyholo aselunxwemeni, ukuhambahamba okufutshane ukuya eRacecourse Beach okanye eRennies thatha ukhetho lwakho. Indawo egqibeleleyo yokusefa kwilitye elisicaba okanye ubambe i-snorkels kunye nepikiniki kwaye uchithe imini kwi-cove. Iikhosi zeGalufa, iRooftop Bar & Grill kunye neWinery yeCupitt iyimfuneko!
Umbuki zindwendwe ngu- Zowie
Inombolo yomthetho: PID-STRA-9690